अब तीन घण्टामै अछामबाट पर्यटकीयस्थल खप्तड ! - नेपालबहस
नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको माखेसाङ्लोमा नअलमिन प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसीको खबरदारी
प्रदेश नं. २ को ‘प्रोभिन्सियल प्रोफाइल’ सार्वजनिक
जुवातासको खालबाट नगदसहित पाँच जना पक्राउ
मोटरसाइकल चोरी गरी लैजाँदै गर्दा २ जना पक्राउ
मुगा जस्तो देखिने मालासहित ३ जना पक्राउ
बहुमुल्य धातु जस्तो देखिने पत्थरसहित २ जना पक्राउ
गृहपृष्ठ अर्थ/व्यापार पर्यटन अब तीन घण्टामै अछामबाट पर्यटकीयस्थल खप्तड !
अब तीन घण्टामै अछामबाट पर्यटकीयस्थल खप्तड !
अछाम । पर्यटकीयस्थल खप्तड जानका लागि अछामबाट पैदलमार्ग निर्माण भएको छ । साँफेबगर नगरपालिकाको वडा नं १२ उनिसैनबाट तीन घण्टामै खप्तड पुग्ने गरी पदमार्ग निर्माण गरिएको हो ।
साँफेबगर नगरपालिकाको रु १० लाख आर्थिक सहयोगमा तथा खप्तडका स्थानीयवासीको सक्रियतामा पैदलयात्रामा सहजताका लागि बाटो निर्माण गरिएको बताइएको छ । उनिसैनदेखि गणेश मन्दिरसम्मको पदमार्ग निर्माण भएसँगै अछामबाट खप्तड जानेका लागि यात्रा छोटिएको छ ।
उनिसैनदेखि गणेश मन्दिरसम्मको पैदलमार्ग निर्माण भएसँगै अछामबाट जाने अन्य सबै रुटभन्दा छिटो खप्तड पुगिने स्थानीय हर्क रावलले बताए । बाटो निर्माण हुनुपूर्व अप्ठेरो बाटो पाँच÷छ घण्टा लाग्ने भए पनि अब दुई घण्टामै खप्तड पुग्न सकिने रावलको भनाइ छ ।
उनिसैन पर्यटकीय सेवा केन्द्रका सञ्चालक भीम रावलले पैदलमार्ग निर्माण भएसँगै पर्यटक पनि बढ्दै गएको बताए। बाटो निर्माण हुनु पहिले महीनामा १५-२० मात्र हिँड्ने गरेकामा पछिल्लो समय दैनिक २० जनासम्म पर्यटक खप्तड जाने गरेको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाको सहयोगमा निर्माण भएको पदमार्गको स्थलगत निरीक्षण गर्दै साँफेबगर नगर उपप्रमुख विर्मला बुडथापाले पर्यटकलाई सहजरूपमा खप्तडसम्म पु¥याउने उद्देश्यले यो कार्य गरिएको बताए । “अछामबाट खप्तड घुम्न जानका लागि सात किलोमिटर हिँड्न सजिलो हुनेगरी पदमार्ग बनाएका छौँ, खप्तड घुम्न आउनेहरूका लागि हामी निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ” नगर उपप्रमुख बुडथापाले भने ।
यस्तै नगरबाटै रु पाँच लाखको सहयोगमा वडा नं १२ स्थित खप्तडको उनिसैनमा घरबास पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अब साँफेबगर हँुदै खप्तडको उनिसैन पुगेर घरबासको आनन्द लिई दुई घण्टामै खप्तड पुगेर रमाउन सकिने साँफेबगर नगर कार्यपालिका सदस्य शङ्कर भुलले बताए ।
अघिल्लो लेखप्रतिवेदन भन्छ :– सहकारीको ७० प्रतिशत रकम घोटाला
अर्को लेखडडेल्धुरामा चट्याङ लागेर एकको मृत्यु, तीन घाइते
अछामको साँफेबगरमा सडक भासिँदा बस दुर्घटना : १५ घाइते
खोला र नदीको दूषित पानी पिउने बाध्यता हटाउन रिचार्ज पोखरी निर्माण
लुम्बिनी सुन्दरीकरणको काम हुँदै
विचार / बहस414